July 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လေဆာဖြင့်အမွှေးချွတ်ခြင်းအကြောင်း အပြိုင်အဆိုင်တွေ လှပလာကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မိမိခန္တာကိုယ်မှာ မလိုချင်တဲ့အမွှေးအမျှင်တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖယ်ရှားလာကြပါတယ်။ အမွှေးရိတ်ခြင်း၊ အမွှေးနှုတ်ခြင်း၊ အမွှေးကျွတ်ဆေးသုံးခြင်း၊ waxing လုပ်ခြင်းတို့အပြင် လေဆာ(laser) နဲ့လည်း မလိုချင်တဲ့ အမွှေးတွေကို ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။ -လေဆာနဲ့ အမွှေးချွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။ လေဆာနဲ့ အမွှေးအမျှင်…
နို့ဘူးတိုက်ခြင်းနဲ့ ဝေခွဲမရ ဒွီဟများ နို့ဘူးတိုက်တယ်ဆိုတာ အခုခေတ်မှာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ မွေးပြီး အကြောင်းကြောင်းကြောင့်( နို့မထွက်လို့၊ နို့ ပါးစပ်ရှိလို့) နို့မတိုက်ရတဲ့ မေမေတို့လည်း ရှိသလို၊ အလုပ်ခွင့်ရက်စေ့လို့ကလေးကို နို့ဘူးနဲ့ထားခဲ့ရတဲ့ မေမေတို့လည်းရှိတာကိုး။အမေနို့ကအကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် နို့ဘူးနဲ့ပတ်သက်လို့ လူအများမကောင်းပါဘူးလို့ပြောတဲ့ အရာတွေကရော ” မှန်ရဲ့လား”တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါဦး။…
မိခင်တို့ရဲ့ နို့တိုက်ရင်းဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ နို့စို့ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိခင်တွေဟာ အခန့်မသင့်ရင် နို့တိုက်ခြင်းနဲ့ပက်သတ်တဲ့ အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာတွေကြုံရတတ်တယ်၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁. နို့တိုက်ချိန်တွင် နို့သီးခေါင်းနာကျင်ခြင်း ဒါဟာများသောအားဖြင့် ကလေးနို့တိုက်တဲ့ပုံစံမမှန်တဲ့အခါ နို့သီးခေါင်းထိပ်နာကျင်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးကိုနို့တိုက်တဲ့အခါမှာ ကလေးရဲ့ပါးစပ်ဟာ အမေရဲ့နို့သီးအမည်းကွင်းတစ်ခုလုံးကို ငုံမိတဲ့အထိပုံစံပြောင်းပြီးတိုက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဒီလိုနာကျင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။…
သွေးထွက်မှ အပျိုစစ်တာလား … “သမီးအပျိုစင်ဘဝကို သမီးအမျိုးသားကို ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မင်္ဂလာဦိးညမှာ ပုံမှန်သတို့သမီးတွေလို သွေးမဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့ပါလဲ။” အမျိုးသမီးတွေမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အပျိုအမှေးပါးဆုတ်ပြဲပြီး သွေးဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံတာဖြစ်ပင်မဲ့ သွေးမဆင်းပါဘူး။ အပျိုအမှေးပါးဆိုတာ…
အငန်မုန့်ကြိုက်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့အန္တရာယ် ကလေးဖြစ်ဖြစ် လူကြီးဖြစ်ဖြစ်အ ချိုအချဉ် အဖန်အ ခါး အငန်စတဲ့ အရသာစုံ အစားအသောက်ထဲမှာပါမှ “လျှာရင်းမြတ်ကြ” တာကိုး။လူကြီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ အငန်ကို အလွန်အကျွံမစားသင့်ဘူး။စားမယ်ဆိုရင် သွေးတိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အတော်များများ သိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အငန်(ဆား)စားတာကြတော့ရော???? အငန်စား(ဆား) စားတာများမယ်ဆိုရင်…
“အမျိုးသမီးတွေမှာ အတွေ့ရများတဲ့ လိင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာ ၄ ခု” လိင်မှုကိစ္စ ဆိုတာက အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင် မလွဲမသွေ ကြုံလာရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ သဘာဝပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ဒါကို ရှက်စရာတစ်ခုလိုမျိုး မြင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ထုတ်ပြီးတော့ မပြောကြဘူး၊ မဆွေးနွေးကြဘူး၊…
ရှင်မွေးလွန်းတို့ အန္တရာယ် ရှင်မွေးလွန်းဆိုလို့ ရာဇဝင်ထဲက မင်းသမီးကို သွားမမြင်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ကျွန်မတို့ ဆရာဝန်တွေက ကလေးမွေးလွန်းတဲ့ မေမေတွေကို ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့နာမည်လေးပါ။ဆေးပညာအရတော့ ကလေး ” ၅ယောက်”ထက် ပိုပြီးမွေးထားတဲ့ မိခင်တွေကို ကလေးများတဲ့ ( Multipara) မိခင် တွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး…